Topnepalnews.com | ओइ सीमास्तम्भ खोइ ?
ओइ सीमास्तम्भ खोइ ?
Posted on: January 26, 2017 | views: 500
नेपाल–भारत छुट्याउने मुख्य र सहायक गरी एक दर्जन सीमास्तम्भ हराएका छन् । पूर्व कटकुइयाँ र पश्चिम मानखोलासम्मको सीमाका मुख्य ५ ९जंगे पिल्लर० र सहायक गरी दर्जनभन्दा बढी स्तम्भ अहिले देखिँदैनन् ।
ती कहाँ गए त रु स्थानीय प्रशासनको तथ्यांकअनुसार तीमध्ये अधिकांश स्तम्भ खोलाले बगाइदिएको छ ।
दुई वर्षअघिको राप्ती बाढीले मटेहिया २ भगवानपुरस्थित ६४३ ९१४० नम्बर सीमास्तम्भ बगाएको स्थानीयको भनाइ छ । तर, प्रशासनको तथ्यांकमा उक्त स्तम्भबारे उल्लेखै छैन । त्यसअघि ६३५९३०, ६४४ ९१६०, ६४५९१७र१० र ६५७ नम्बरका मुख्य पिल्लर हराएका थिए ।
प्रशासनको अभिलेखमा चार मुख्य र ५ सहायक स्तम्भ बगेका छन् । त्यस्तै ६३८र६, ६३९र१७, ६४३र१, ६४३र२, ६४४र १,६४४र२, ६४५र१ र ६५६र१ नम्बरका सहायक पिल्लर पनि हराइरहेका छन् । ६३६र४, ६४६र१९ र ६५५र३६ नम्बरका मुख्य पिल्लर र १९ वटा सहायक स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । १ मुख्य स्तम्भ र ३ सहायक सीमास्तम्भ पुनर्निर्माण तथा १७ स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
बाँकेको सीमामा मुख्य र सहायक गरी ३ सय ७ स्तम्भ छन् । ३२ मुख्य स्तम्भमध्ये ५ खोलाले बगाएको हो । त्यस्तै २ सय ७५ सहायक स्तम्भमध्ये ५ वटा बगेको र ३ वटा हराएका हुन् । नेपालगन्जको मुख्य नाका नजिकैका सहायक स्तम्भ हराएका छन् । त्यसबारे सीमावर्ती नेपालीले स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी दिँदै आएका छन् । प्रशासनले सरकारलाई लिखित जानकारी गराउँदै आएको छ ।
‘भारतीय समकक्षी सुरक्षा अधिकारीसँग ‘काउन्टर पार्ट’ बैठकमा सीमाबारे पटकपटक छलफल हुने गरेको छ । तर, दुई मुलुकको सीमासम्बन्धी संवेदनशीलताका कारण स्थानीयस्तरबाट गरिएको प्रयासले स्म्भव छैन,’ जिल्ला प्रशासनका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘सरकारस्तरीय पहलबाट मात्रै समस्या समाधान हुन सक्छ ।’
राप्तीले पूर्वी क्षेत्रको सीमास्तम्भ बगाउँदा दुई मुलुकको भूमि छुट्याउन समस्या भएको स्थानीय बताउँछन् । ‘पहिले पिल्लर भएको स्थानमा नदी बगेको छ । बालुवा भरिएका कारण सीमा कहाँसम्म हो भन्न सकिने अवस्था छैन,’ मटेहियाका जगदीश गोडिया भन्छन्, ‘पिल्लर हुँदा नेपाल–भारत भूमि जानकारी हुन्थ्यो । अब थाहै पाइँदैन ।’ दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच सहमतिमा नयाँ सीमा स्थापना, मर्मत वा पुनर्निर्माण गर्न पाइने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ ।
ठाकुरसिंह थारू, बाँकेले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको छ ।